Dawladda oo lagu dhaleeceeyey go’aammo aan caddeeyn - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bolis xaduudda oo baaraya dokumentiyada aqoonsi dadka saaran tareenka ka yimid dhanka Danmark. sawir: Stig-Ã
Dawladda oo lagu dhaleeceeyey go’aammo aan caddeeyn
Go'aammadii xudduud-xirista oo la sheegey in aaney caddeeyn
La cusbooneeyay torsdag 17 november 2016 kl 13.06
La daabacay torsdag 17 november 2016 kl 09.14
Go’aankii xuduud-xirka dawladdu ku tallaabsatay sannadkii ina dhaafay ayaa ahaa mid aan qeexnayn.
iyo habka loo sababeeyey oo aan ahayn mid habboon, sida ay sheegtay hayadda dul-socodka qaranka ee loo yaqaanno Riksrevision-ka.
Kolkii ay dawladda dalkani 12-kii bishii noveember ee sannadkii ina dhaafay 2015 si ku meel-gaar ah ugu tallaabsatay ilaalinta xudduudaha ayay ku macneeysay inay tallaabadaasi ahayd mid ka soo yeertay wakaaladda socdaalka oo ay ula muuqatay in qaxootiga faraha badan ee dalka waagaasi ku soo qulqulayey aannu ahayn mid awood loo leeyahay in la maareeyo.
– Wakaaladda socdaalka ayaa ku sababeeysay inay ka welwel-qabto ammaanka dalka, in aanay suurtagal ahayn sidii qaabilaad dadkaa ku habboon loo siin lahaa , sida uu sheegay madaxa dawladda Sweden Stefan Löfven habeenkii ka horreeyay go’aan ka gaarista.
Dawladda ayaa sidoo kale sheegtay in farriinta ka soo gaartay ciidanka ammaanka ay ahayd halis ammaanka iyo nidaamka looga cabsi qabo, howluhuna yihiin kuwo aad u culus. Waana fikirro siyaabo kala duwan loo sharraxan karo, sida ay sheegtay hayadda Riksrevision-ka.
– Dhibaatadu waxay tahay in siyaabo kala duwan loo tarjuman karo erayga ”halista”, kolka loo eego habka jumladdu u qoran tahay. Sidoo kale waxaa adkaanaysa in la fahmo goolka laga leeyahay go’aankan baarista xudduudaha, sida ay sheegtay, Helena Fröberg ahna sarkaaladdii hoggaamineeysay baaritaankan.
Dhanka kale, kolkii ay dawladdu go’aan ku gaartay in xilligii kontroolka xuduudaha la sii kordhiyo ayaanay suurtagal ahayn in daba-gal lagu sameeyo baahida loo qabay go’aankaa, sida ay sheegtay Helena Fröberg.
– Qoraallada na soo gaarey iyo wada-hadallo aannu la yeelaney shakhsiyaad gacan ku lahaa howlahaa ayaanay ku caddaan sababta go’aankaa ka dambeeyay, sida ay sheegtay.
Halka uu wasiirka arrimmaha guddaha Sweden (S) Anders Ygeman sheegay in la qaatay dhabbo la rogrogi karo sidii loo hir-gelin lahaa go’aankii xudduud ilaalinta.
– Haddii aannu qaadan lahayn dhabbada ay hayadda Riksrevision-ku soo ban-dhigtay iyo in kontroollada inta ey yihiin iyo goobaha la dhigeyo, ayay howshaasi ka xumaan, ka qarash badnaan lahayd, isla-markaana aan laga gaareen goolkii laga lahaa, sida uu sheegay Anders Ygeman.
Hase yeeshee uu wasiirku la qabo dhaleeceeynta ay hayaddu u soo jeedisay ee ah culuunta dadyoowgii howlahaasi ku howlgalayey iyo habka go’aanka loo gaarey.